Manapa-kevitra sahady: Haka sy hametraka ny valiny | Martech Zone
Manapa-kevitra sahady: Makà valiny sy valiny
Talata, Febroary 11, 2014 Douglas Karr
Tianay ireo fitaovana izay misambotra vaovao avy amin'ny mpanjifa, saingy tena tsy misy vahaolana tokana. Indraindray ianao dia mila safidy isan-karazany amin'ny fanontaniana, indraindray fanontaniana sy valiny mavitrika, amin'ny fotoana hafa ilanao manokana. Nangatahina ho mpitsara tany Indianapolis aho ' Loka TechPoint Mira ho an'ny 2014 ary Joshua Hall dia mampiasa ny fitaovan'ny mpitsara hisambotra vaovao sy hifidy isaky ny olona voatendry. Fitaovana lehibe iray izay vokatra hafa amin'ny fanavaozana incubator ao amin'ny SproutBox.
Miasa ny fomba fanapahan-kevitra
Manapa-kevitra sahady somary tsy mitovy amin'ny ambiny… fitaovana haingana (sy maimaim-poana amin'izao fotoana izao) izay mamela anao hizara fanontaniana hifidianana na hanomezana toerana ary hahazo valiny haingana sy tsy misy ezaka.
Ireto misy antony 5 hisoratana anarana rehefa manapa-kevitra:
Maimaimpoana! Maimaimpoana ny fampiasana fanapaha-kevitra. Maimaimpoana ny fomba fanapaha-kevitra anay sy laharana. Na ny fomba fanapaha-kevitra faratampony aza, manasongadina ny Machine DecideAlready Decision dia maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Atsaharo ny 'valiny-valiny' amin'ny mailaka - Rehefa mangataka vondron'olona mitady hevitra amin'ny alàlan'ny mailaka ianao dia matetika no mamaly valiny valiny toa tsy misy farany. Ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia liana kokoa amin'ny filazany fa tsy mihaino ny an'ny olon-drehetra.
Mandraisa fanapahan-kevitra haingana kokoa - Misy fanapahan-kevitra mila raisina haingana. Manapa-kevitraMba mangataka valiny eo noho eo ary manisa ny valiny eny am-pandehanana. Manana ny safidy hamerana fotoana hamaliana ianao. Ny milina fanapaha-kevitra dia efa afaka manisa ny valiny ho azy ary mandefa mailaka ny fanapaha-kevitra farany ho an'ireo mpandray anjara.
Manamboara fahatokisana. Manangana marimaritra iraisana - Rehefa manapa-kevitra amin'ny fampiasana ny fanapaha-kevitra ianao dia ho fantatry ny mpandray anjara rehetra fa re ny feony. Ho fantatr'izy ireo ihany koa fa ny hevitr'izy ireo dia noheverina ho ara-drariny, ary fanapahan-kevitra matihanina no noraisina.
Ny milina fanapaha-kevitra - Mahery ary mahafinaritra! Ny milina fanapaha-kevitra dia manampy anao handray fanapahan-kevitra sarotra indrindra. Ireo mpandray anjara dia afaka manombatombana ny valinteninao tsirairay avy mifototra amin'ny mason-tsivana maro. Rehefa mikatona ny fifidianana dia azonao atao ny manitsy ny lanjan'ireo masontsivana tsirairay. Ny fanapaha-kevitra Machinepredicts ny vokatry ny fihetsikao amin'ny fanapahan-kevitra farany eo noho eo!
Marketing nomerika sy ny fiantraikan'ny horonantsary